Ọdachi kachasị njọ nke 2016 | Netwọk Mgbasa Ozi
Afọ 2016 bụ afọ nke ọdachi ndị na-emere onwe ha abụwo otu n'ime ndị isi na-akwado. Ajọ Ifufe Matthew, ala ọma jijiji na Italy, ọkụ ọgbụgba na California ... Ha nile egbuola ndụ nke ọtụtụ puku mmadụ ma kpatara oke mbibi ihe onwunwe. na mpaghara niile metụtara.
Ugbu a afọ na-erule njedebe, ka anyị tụleghachi Kedu ihe kpatara ọdachi kacha njọ nke 2016.
1 Ala Ọma Jijiji na Taiwan
2 Idei mmiri na Pakistan
3 Ọkụ na California
4 Ala Ọma Jijiji na Italytali
5 Ajọ Ifufe Matthew
Ala Ọma Jijiji na Taiwan
Afọ malitere njọ na Taiwan. N’ebe ahụ, n’ọnwa Febụwarị, ala ọma jijiji ruru 6,4 n’ogologo gburu 26 mmadụ, na ihe karịrị 258 a napụtara.
Idei mmiri na Pakistan
N'April, oke mmiri ozuzo butere ọtụtụ nsogbu na Pakistan, mba ebe idei mmiri bụ ọdachi nkịtị. Afọ a, Mmadụ 92 nwụrụ, 23 n'ime ha n'ihi oke mbuze. E debanyere aha ọtụtụ n'ime ndị a na mpaghara Khyber Pakhtunkhwa.
Ọkụ na California
Na California ọkụ bụ ihe ịtụnanya ugboro ugboro, mana afọ a kachasị njọ. N’ọnwa Juun ọkụ gbara n’elu ihe karịrị hekta 100 n’okporo ụzọ Erksine Creek, ihe karịrị ụlọ XNUMX bibiri. Otu ọnwa mgbe e mesịrị, n'August, ọkụ ọzọ dị na ya gbara ihe karịrị hekta 14.550, na-amanye mwepụ nke ihe karịrị mmadụ 82 puku.
Ala Ọma Jijiji na Italytali
Ke August a ike ala ọma jijiji nke dị 6,2 na Richter metụrụ etiti Italy, nke dị nso n'obodo Accumoli. Ihe kpatara ọnwụ 247 dịkarịa ala, ihe dị ka mmadụ 400 merụrụ ahụ.
Ajọ Ifufe Matthew
Haiti mgbe Matiu gachara. Foto - Reuters
El Ajọ Ifufe Matthew ọ bụ mbibi kachasị njọ nke oge ifufe nke Atlantic afọ a. O ruru udi 5, nke ikuku ya ruru 260km / h, na gburu 1655 mmadụ, 1600 naanị na Haiti.
Ọdachi ndị na-emere onwe ha na-eme mgbe niile. Nwere ike imeghari naanị otu ị nwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ọdachi ndị kachasị njọ nke 2016
Donald Trump na-aga n'ihu na-eche echiche ma ọ ga-apụ na Nkwekọrịta Paris ma ọ bụ na ọ bụghị